Vita ny asa fanarenana ka namerenana amin’ny laoniny ny Lapan’Andafiavaratra vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny Unesco sy ny masoivohon’i Japon. Nisy koa ny fanofanana ireo mpikajy vakoka. Misokatra ho azon’ny besinimaro tsidihina ankehitriny ny Lapan’Andafiavaratra. Tao no nametrahana ireo fitaovana sy fanaka sisa tsy may tao Anatirova tamin’ny 6 novambra 1995.
jeudi, 20 juin 2019 15:08
Antsirabe: Sambany ny hetsika "Grande Foire des Enfants et Maman"
Ho tontosaina voalohany eto Antsirabe ny 22 sy 23 jona izao ny Tsenaben'ny Reny sy ny zaza na ny "Grande Foire des Enfants et Maman". Ny fikambanana Away Communication no tompomarika amin'ny hetsika, izay kendreny hitohy isan-taona, raha toa ka ao Antananarivo hatrany no misy hetsika ho an'ny Reny sy ny zaza, ka ireo mpandraharaha mian-tsehatra amin'izany no entiny voalohany aty Antsirabe mba ho fanomezana fahafaham-po ny mponinan' Antsirabe. Tafiditra amin'ny fankalazana ny Iray volan'ny ankizy ihany koa ny hetsika, satria homena sehatra be dia be ny ankizy mandritra ny hetsika.
jeudi, 20 juin 2019 14:22
Finoana: 100 taona ny FJKM Ambohimandroso Filadelfia - Antsirabe
Hosantarina anio Alakamisy 20 Jona ny fankalazana ny Jobily faha-100 taonan'ny Fiangonana FJKM Ambohimandroso Filadelfia Antsirabe, eo Avaratsena. Hisy fotoam-bavaka anio hariva hanombohana izany ary hitohy isan-kariva ny hetsika mandra-pahatongan'ny Alahady 23 Jona hankalazana manetriketrika ny fanokafana ny fankalazana. Ny 20 Jona 1920 no nisokafan'ity Fiangonana ity voalohany.
jeudi, 20 juin 2019 13:45
Fankalazana ny fetim-pirenana: Hivetso “gospel” i Maggie Blanchard
Ho avy eto Madagasikara ilay vehivavy mpihira “gospel” ara-pilazantsara malaza, Maggie Blanchard. Hanao fampisehoana ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina izy amin’ny alahady tolakandro. Tsy vaovao amin’ny mpankafy “gospel” ara-pilazantsara i Maggie Blanchard. Efa nanao fampisehoana teto izy tamin’ny 2013, ary nisy ny fiarahany an-tsehatra tamin’ny TGC (Tana Gospel Choir). Teraka tao Port-au-Prince any Haïti i Maggie Blanchard ary mipetraka ao Québec, Canada. (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka fanambarana ao amin’ny pejiny Facebook, androany, ny ministeran’ny fiarovam-pirenena milaza fa “ho amin’ity taom-pankalazana ny faha-59 ny tsingerintaonan’ny fahaleovan-tena sy ny nijoroan’ny Foloalidahy Malagasy ity dia afaka atao ny mivarotra sy ny manapoaka izany any an-tokantrano misy azy tsirairay avy”. Nanipika mazava kosa ilay fanambarana fa “raràna mafy arak’izany ny fanapoahana izany eny amin’ireo toerana vory vahoaka, hopitaly sy ireo toerana saro-pady toy ny manodidina ny Toby misy ny mpitandro filaminana ary ireo toerana manakaiky ny tobin-dasantsy samihafa”. Ao anatin’ny ivon’ny fankalazana ny fahaleovantena isika izao ka mandritra izany dia tsy azo atao ny mandika ireo toerana izay voalaza fa tsy afaka hananterahana izany, mihatra avy hatrany ny lalàna ho an’ireo izay mihoa-pefy amin’izany. Ho fitandrovana ny ratra na ny aina ho an’ny rehetra ary koa ho fanomezana hafaliana ho an’ireo ankizy tia milalao izany no anton’ireo fepetra ireo.
mardi, 18 juin 2019 12:04
Sary: Sylvia Evangelique
Sylvia: Sady mpihira « évangélique » no mikarakara ireo sahirana sy mahantra
Miara-miasa amin'ny sekoly, hopitaly, Fiangonana ary Fokontany ny fikambanana "FITAHIANA" tarihin’i Sylvia. Zanaka mpanakanto ity farany, sady mpihira « évangélique » izy, no mikarakara ireo sahirana sy mahantra efa taona maro. Boky aman'arivony, fitafianana, sakafo, kilalao...no efa nozarain’ny fikambanana tarihiny. « Tsy manao politika fa politikan’i Kristy no ataoko », hoy i Sylvia ary manentana ny Malagasy rehetra hitsinjo ny madinika. (Jereo Sary Tohiny)
Hisy seho maimaimpoana « Fetin'ny Mozika » hotanterahina eo amin'ny tokontanin'ny Tranombokimpirenena Anosy ny Zoma 21 Jona 2019 manomboka amin'ny 1 ora handraisan'ny mpanakanto maro anjara. Anisan’ireo handray anjara amin’izany ry Tsiliva, Nate Tex, Rakroots, Raboussa, BenJ, Gangstabab, Bakidy Zezety, DJ Gouty, Francis Turbo….
vendredi, 14 juin 2019 13:41
Mpanakanto: Nodimandry i Dors (Dors Groupe)
Namoy olomanga ny kanto Malagasy. Nindaosin'ny fahafatesana androany, tamin'ny 3ora maraina tao amin'ny hopitaly be Toamasina, i Dors na Razanadahy Théodore Stéphan, fa izay ny anarany feno. Mpikambana mpamorona ny tarika mpihira Dors Groupe izy, tarika niforona tamin'ny 1983 ary anisany tao amin'ny tarika Kaiamba. Maro ny hiran'ny tarika, anisany nahalalana azy ny "Tsy nampoiziko", "Tsy anjara", "Leboto", "Mitongava mamangy",...
mardi, 11 juin 2019 10:00
Mozika: Nodimandry androany maraina i Donat Rasamimanana
Maloka ny tontolon’ny mozika sy hira malagasy. Nindaosin’ny fahafatesana androany maraina i Donat Rasamimanana. Mpitendry zavameno, mpamoron-kira, mpandrindra mozika,… mpanakanto feno i Donat Rasamimanana. Mpanakanto maro no efa niara-niasa taminy sy novolavolainy, toa an-dry Aina Cook, Tovo Jhay ... (Jereo Sary Tohiny)
Nandritra ny fampisehoana tao amin'ny Lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina, androany no nanoloran’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo ny mari-boninahitra « Commandeur de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture », an’i Solofo, na Rasolofoniaina Nomenjanahary Andriambao, fa izay no tena anarany feno, ho fankasitrahana ny asa vitany tamin’ny fanabeazam-boho sy fanandratana ny mozika malagasy. Mpitendry angorodao sy vatamaroafitsoka kalaza i Solofo. Mpamoron-kira ihany koa izy, miara-miasa amin'ny mpanakanto maro ary anisan'ny nanandratra avo ny lazan’i Madagasikara sy ny mozika malagasy. (Jereo Sary Tohiny)